के यो काठमाडौं भन्न लायकको छ त ? - Birgunj Sanjalके यो काठमाडौं भन्न लायकको छ त ? - Birgunj Sanjalके यो काठमाडौं भन्न लायकको छ त ? - Birgunj Sanjal
७ भाद्र २०७६, शनिबार ०३:०२
काठमाडौं : कागेश्वरी-मनहरा र शंखरापुर नगरपालिका देशकै राजधानी काठमाडौंभित्रै पर्छ । राजधानीमै पर्ने यी नगरपालिका विकसित होलान्, राम्रा–राम्रा सडक होलान् भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ ।
यस्तो लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर, यथार्थमा यस्तो छैन । शंखरापुरको साँखु चावाहिलबाट मात्रै साढे १२ किलोमिटर पर्छ । दूरीका हिसाबले यसलाई खासै टाढा मान्न सकिँदैन । तर, त्यहाँ पुग्न घण्टौँ लाग्छ । त्यो पनि सडकको धुलो र जाम त सामान्यजस्तै भएको छ ।
०७२ असोज १३ गते लागेको ठेक्काको म्याद दुई पटक थप भइसकेको छ । आयोजनाले अहिलेसम्म ५१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ । एक अर्ब ७३ करोड ५४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा ९५ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ ठेकेदारले प्राप्त गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।